Urur Goboleedka IGAD oo war kasoo saartay xaaladda kala guurka ee SOOMAALIYA | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Urur Goboleedka IGAD oo war kasoo saartay xaaladda kala guurka ee SOOMAALIYA
Madaxda Dowlahaha IGAD oo maanta shir ku yeeshay aaladda la iska arko ee online-ka maanta ayaa ka hadlay Hannaanka Nabadda ee Koonfurta Suudaan, xaaladda kala guurka Soomaaliya iyo cudurka COVID19.
Go’aamada ugu muhiimsanaa ee Soomaaliya khuseeyo ayaa waxaa kamid ah in dalalka IGAD ay bogaadiyeen dadaallada dowladda Soomaaliya ku dooneyso in doorasho qof iyo cod ah laga hirgaliyo dalka.
“IGAD waxay dhiirrigelinaysaa dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan in la hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah, waxayna kusoo dhiirrigelineysaa dhammaan dhinacyada in ay ka qeyb qaataan hannaanka taarikhiga u ah Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay shirka.
Dhanka kale, wadahadallada DFS iyo Somaliland ee uu hormuudka ka yahay Madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa lagu soo dhaweeyay war-murtiyeedka.
Shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb-galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Hoos ka aqriso qoraalkan oo ka soo baxay Villa Somalia
Urur Goboleedka IGAD oo war kasoo saartay xaaladda kala guurka ee SOOMAALIYA was last modified: July 15th, 2020 by Admin
RW Rooble Oo Kulan La Qaatay Wasaaradda Iyo Guddiyada Dib U Eegista Dastuurka
Maamulka Gobolka Bay Oo Mamnuucay Qodista Waddooyinka Iyo Dhismaha Guryaha
Khasaaro ka dhashay weerar bambaano oo ka dhacay Shabeellaha Hoose
Laamaha ammaanka oo la faray inay gacanta ku soo dhigaan kuwii Xildhibaanka dilay